The Power of Apologizing - We Love Myanmar
Posted on August 25, 2017 August 28, 2017 by We Love Myanmar
သူတပါးကို နာကျင်အောင် လုပ်ဆောင်မိပြီးနောက် ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းရာမှာ အလွယ်ကူဆုံး ပြောဆိုရန် အသုံးအနံးရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ … သီးခံပါနော် … မတော်လို့ပါနော် …. အခန့်မသင့်လို့ပါနော် … တိုက်ဆိုင်သွားလို့ပါနော် … ဆောရီးပါနော် … တောင်းပန်ပါတယ်နော် … ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် … ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားလုံးတွေက နာကျင်သူကို ချက်ချင်းစိတ်ပြေစေပါတယ် သို့သော် တချို့က ပြောရမှာ အခက်ခဲရှိကြပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် ခွင့်လွှတ်ဖို့ အဆင်သင့်စောင့်နေတာ ဒါမယ့် တောင်းပန်ချင်သူနဲပါတယ်။
ကျမအနေနဲ့ကတော့ ဒီစကားလုံးတွေကို ဖေါဖေါသီသီသုံးပါတယ်။ လမ်းသွားရင်း ၂ ပေခန့်အကွာမှာ လူတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ တိုက်မိခါနီးဖြစ်ရင်တောင် ဆောရီး .. သီးခံပါလို့ ပြောပါတယ် … ရင်ဆိုင်မိတဲ့သူက အပြုံးလေးနဲ့ထွက်သွားလေ့ရှိတယ်။
တခါတလေ စကားပြောရင်းဖြစ်စေ၊ စာရေးမိတာဖြစ်စေ၊ မိမိဖက်က မမှားရင်တောင် မထင်မှတ်ဘဲ တစ်ဖက်သူကို စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေရုံလောက်နဲ့တင် ကျမက ဆောရီးပါ သီးခံပါ တောင်းပန်ပါတယ်လို့ ချက်ချင်းပြောဖြစ်လေ့ ရှိပါတယ်။
တောင်းပန်တိုင်းလဲ တောင်းပန်သူဖက်က မှားလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေကို ငြိမ်းအေးစေလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့ တောင်းပန်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တချို့ကတော့ နာကျင်စေတဲ့စကားတွေ ပြောပြီးနောက် သူတပါးကို နာကျင်စေမိပြီဆိုတာ သိရဲ့သားနဲ့ တောင်းပန်တဲ့စကားကို မပြောချင်ဘူး။
တချို့ကျတော့လဲ သူတပါးကို ပြစ်မှားပြီးနောက် ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းသင့်ကြောင်း သိရက်နဲ့ မာနကြောင့် မဖြေရှင်းချင်ဘူး။
တချို့ကျတော့ တောင်းပန်ရကောင်းမှန်း မသိကြဘူး။ ဘယ်လို ဖြေရှင်းရမှန်း မသိကြဘူး။
တချို့သူတော်ကောင်းတွေကတော့ မတောင်းပန်တဲ့သူကိုလဲ ခွင့်လွှတ်ဖို့ အဆင်သင့် စောင့်နေပြန်တယ်။ မတောင်းပန်ခင် ခွင့်လွှတ်ပြီးသား ဖြစ်နေပြန်တယ်။
သင် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို နာကျင်အောင် ပြောခဲ့ဖူးပါသလား
သင် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို စိတ်မသက်မသာဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ဖူးပါသလား
ထိုသူရဲ့စိတ်ကို အနာငြိမ်းအောင် ချိုသာတဲ့စကားလုံးနဲ့ ဒီနေ့ ဆေးတစ်ခွက်အဖြစ် တိုက်ကြည့်လိုက်ပါလား
သင့်မှာ မထင်မှတ်တဲ့ ကြည်နုးစရာကောင်းတဲ့ စိတ်ချမ်းသာတဲ့ ဘ၀လေး ပိုင်ဆိုင်သွားတဲ့အပြင် သူတပါးရဲ့ဘ၀ကို တည်ဆောက်ပေးသူ ဖြစ်သွားပါမယ်။
သူတပါးကို တောင်းပန်နိုင်စွမ်း အင်အားရှိတဲ့သူ …
သူတပါးကို ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူများ ဖြစ်ကြပါစေလို့
This entry was posted in Myanmar and tagged gentleness, healing, I Love Myanmar, words.
878 thoughts on “The Power of Apologizing”
အစ်​မရယ်​။ ​လေးစားပြီးသာပါ ခုဆို ပိုပြီးရုဏ်​ယူပြန်​ပြီ။
Amen and sorry
Sui Din Par says:
အရမ်းကောင်းတဲ့စာ လေးတွေပါ အမြဲမှတ်ထားပါ့မယ်…
Marina Myint says:
I fully understand what you mean. Forgive and forget is the best solution for all of us. But in this world people are not like that.
I truly understand what you mean. Forgive and forget is the best solution for all of us. But in this world people are not like that.
တောင်းပန်ကြတယ် ခွင့်လွှတ်ကြတယ်ဆိုတာ မွန်မြတ်တဲ့နှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေပါ လေးစားပါတယ်ခင်ဗျာ
You Thae says:
အမြဲ လုပ်နေ ကျပါ ညီမ ။ စိတ်ကို တော့ အမြဲ မြင့်အောင် နေ့ စဉ်သုံးသပ် တရား နဲ့ အညီ ပြင် ပါတယ် ။
Mya Mya San says:
စိတ်ထားလေး ဖြူစင်တဲ့မမ အမြဲပျော်ရွှင်ပါစေ ရှင့်
Nan Kaythi Sawmyint says:
ငြိမးချမ်းခြင်းကို သယ်ဆောင်တဲ့ စကားလုံးလေးတွေပါ အရမ်းဖတ်ခို့ကောင်းတယ် ကိုယ်လဲ အမြဲ သုံးတယ်
Ngwe Sandar Win says:
Mai Nini says:
Aye Aye Khaing says:
စိတ်ဓာတ်ကောင်းလေးတွေ ထားနိုင်ဖို့ share ပါရစေ
Jesse Tun says:
Absolutely right. I love the dress.
Salai Chin Nian Ha says:
ကျေးဇူးပါ ဆရာမ ပြောပြပေးတဲ့အတွက်
Saw Win Phyu says:
LalMuan Kimi says:
Tha lutuk dik lutuk bawk
ကျေးဇူးပါမမ မှတ်ထားပါ့မယ်..
Honey Iang Zahau says:
BiakCung Duhnungte says:
Kawlca mamin bu…. pla
Duhnunglote.na selua tuah vat2 aw na ph
Versionatamtuk
Dawr ih thunatul.
Va tuahter lohli.
Kal.mai teh a
Na scren dingih i kuat ding hmang tinak i lai.
Ka Share mi ah ka timeline ah ka comment rak va siar awațha manhla tuk.
Mi na scren ter ta bel ih.
Royal Shwehtar says:
Min Aung Khine says:
ကိုယ်မှားနေမှန်းသိသိနဲ့ မတောင်းပန်တဲ့သူကိုတွေ့တဲ့အခါ စိတ်ပျက်ရသလို လူ့ကျင့်ဝတ်နားမလည်သူလို့ပဲ သတ်မှတ်ရတာပေါ့လေ။
မနှစ်က ကလေး -ဖလမ်း-ဟါးခါးလမ်း
မှာဆက်သွယ်ရေတိုင်တွေကို လမ်းဖေါက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေက ကိုယ်ချင်မစာတွန်းချနေတါတွေ့ရတယ်လို့အမရေးတုန်းက စိတ်ခုပြီး အမကိုကျွန်တော်ပြန်ရေးမိတယ်/အခုအဲ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမအေါင်မြင်ဘူးအမ တိုင်တွေ %အပြည့်နီးပါးမြေပြို တဲ့အထဲပါသွားပြီ ဘါဖြစ်ဖြစ်အမက စာနာစိတ်နဲ့ရေးဒါဖြစ်လို့ အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ရေးတါအမှားပါရင်ခွင့်လွတ်ပါ
မင်္ဂလါပါ … အဲတုန်းက ပြန်ပြောခံရတာကို သတိမထားမိတော့ပါဘူး ဒါမယ့် အခုတောင်းပန်တယ်ဆိုရင် ခွင့်လွှတ်ပြီးသားပါလို့ ပြန်ပြောချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အခုလို သတင်းကြားရတော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ကြိုးတိုင်တစ်တိုင်တန်ဘိုးလဲ ပြည်သူတွေက ပေးနေရတာပါ။ သိပ်နှမျောဘို့ ကောင်းပါတယ်။ လုပ်ငန်းအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
Soe Soe Myint says:
Dim Nem Cing says:
Winmg Mg says:
လူ့ အောက်ကျို့လို့ လူမပိပါဘူးဆိုတဲ့စကားလိုပေါ့ ကျွန်တော်တို့လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ့် အမြဲနှိမ့်ချပါတယ် ..
လုပ်ပေးနိုင်တာများ ရှိရင်လည်း ပြောပါနော်
ပူးပေါင်း ပါဝင် ပါ့မယ်
Ram Thio says:
Tha tuk,,Lai tong tein tla si seh la kan hlawk pi sin sin ding hrangtla ah
Chin tong siar na duh len ka fbadang pakhat ah ra siar aw, hinah cu Kawl tong ih ka ngan nak asi, ka rawi duh lo ruangah si.
Mote Thone says:
လေးစားချီးကျုးပါတယ် ။တအား အားကျဂုဏ်ယူလို့အပြင်မှာတခါလောက်ဆုံဖူးချင်ပါသေးတယ်။
Levi Sap Nei Thang ဆုံခြင်ပါတယ် ရှင်
Cho Too Cho Too says:
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ဖြေသာသလိုရှိပေမဲ့ ခံရသူအဖို့ အောက်သိအောက်သက်တော့ ဖြစ်နေမယ် အမှားအမှန်မူ တည်ပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ကျေအေးသွားကြရင် နောင်မှားဘို့ အမှားရှိသူက ဆင်ခြင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် အပြန်အလှန် အခဲမကြေ တုန့်ပြန်နေကြမယ်ဆိုရင် အတုံ့အလှည့်များ တလှည့်စီ ပြန်၍ခံစားသွား ကြမယ်လို့ ထင်မြင်မိပါကြောင်း
Thawng Cung Zel says:
Song Hein says:
Ei Mon Soe says:
Aungnaingwin Monywa says:
အာ gentalmen ဆန်တာပေါ့
Ayeaye Khaing says:
စကားလုံးလေးတွေလှပါတယ် ဗဟုသုတရပါတယ်share ခွင့်ပြုပါ
Yu Yu Thein says:
Lengtong Kam Khen says:
Khin Myo Sint says:
Nubawi SialSih Nu Bawi says:
wowo sayamah . dik famkim thei tuk
a lungawi um
Betsy Kim Boih says:
U Mg Mg says:
Beru Beru Mar says:
U Aung Myint says:
Mami Lalramhluni Hualngo says:
Paulina Swan says:
Good. Let me share ma
Chan Mya Nyein says:
Joycee Suite says:
Angle Smilelay says:
နာဂစ်မှာ သိန်းပေါင်း ၁ သိန်းလူတည်းက သာဓုခေါ်ခဲ့တာပါ ဘာသာမတူပေမဲ့ အမ စိတ်ထားအတွက် congrat !
Ni Ni Khin says:
Ma Thi says:
Lu Tin says:
Daw Aye Than says:
Ma Ma Zar Zar says:
Daw Thida Pw says:
ဟုတ်ပါတယ်အစ်မ တောင်းပန်တယ်ဆိုတာ အခုခေတ်မှာ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုလိုတောင်ဖြစ်နေပါပြီ ကိုယ်မမှားလည်း တောင်းပန်မှုနဲ့နားလည်မှုယူနိုင်ကြပါစေ
Lin Lae Htay says:
Tling Thluai-Grace says:
Niang Hau Lun says:
ကျနော့ကိုတော့ နဲနဲ ချောင်နေပြီလို့ သူငယ်ချင်းတွေက မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ လူကိုတင်မကပါဘူး တိရစ္ဆာန် ခွေး လေးတွေကိုမတော်တဆ တက် နင်းမိရင်တောင် i am sorry လို့ပြောတတ်သူပါ။ တိ လေးကတော့ ဘယ်ဘာသာစကားနဲ့ပြန်ပြောသွားတာလဲဆိုတာတော့မသိပါ။
Su Chit Thu says:
Bumtsaw Shayi Lahtaw Nicole says:
Pauk Pauk says:
Rebecca E Nuam Nuam says:
Khin Thant Sin says:
yes please share this post, thank you
ခိုင်ဦး နောင် says:
​ကျေးဇူးပါ ..မမ
page ကို LIKE လုပ်ထားရင် ရပါပြီ
ခိုင် ဦး နောင် says:
Na mawi z.
Htang Om says:
Yes ;V li.
တိုင်းပြည်​နဲ့ ကိုယ့်​တိုင်းရင်းသား ​တွေအတွက်​ အမြဲတန်း ဂရုစိုက်​တဲ့ သူမိုလို့ ​လေးစားပါတယ်​
Sanda Htut says:
ကျိုးစားပါ့မယ် တောင်ပန်းတတ်
A Ring Sheong says:
ကျိုးစားပါ့မယ် တောင်းပမ်းတတ်
Cho Cho Swe says:
Kyi Kyi Phyu says:
A tha tuk law law
Aung Naing Shwebaho says:
Ko Kolay says:
Ei Hnin Dar says:
စံကား တစ်ပွင့် says:
Charity Htoo says:
Daw Damay Thi says:
Mah Shwe says:
Nwe Ni Aung says:
Essential Moe says:
စာသားလေးနဲ့အဓိပါယ်သိပ်ရှိပြီးတန်ဖိုးရှိလွန်းလို့ Share လိုက်ပါတယ်ရှင့်
Nayzar Nu Nu Nway says:
Let me share Sis.
Nan Marlar says:
Phakant Thu says:
အောင် ဗလ says:
စက်တင်္ဘါ အလွမ်း says:
Kap Te says:
Khin Lay Myint says:
Khin Khin Gyi says:
Saw Eh Do says:
Wowww So good
Nyi Nyi Shein says:
ဒီလို စိတ်ထားတွေရှိလို့အောင်မြင်မှုတွေ ရနေတာလို့ ယုံကြည်ပါတယ်
Win Zaw Oo says:
ရှေ့အတွက်အားတွေပေးနေသလိုပါဘဲ လေးစားပါတယ် အမကိုအပြင်မှာတွေ့ဖူးချင်တယ်
အနာဂါမှာ ဆုံတွေ့မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်
Daw Mway Mway says:
အမရေ အမြဲသတိရပါတယ် နောင်တစ်ချိန်မှာပြန်တွေ့ခြင်ပါသေးတယ် 🙂
Lay Kyi says:
I love you! Your good deeds are highly appreciated! God bless!!
Daw San Yee says:
Ah Bu says:
ဘရ ဏီ says:
Lian Cer says:
Ahman tuk. Lung awi
လေ ပြည် says: